के तपाईलाई पियूष प्लसका बारेमा थाहा छ ? – WASHKhabar
२१ श्रावण २०७६, मंगलवार १०:०८ 501 पटक हेरिएको
काठमाडौ : अरु समयमा भन्दा बर्षायाममा पानीजन्य रोगहरु फैलिने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसका लागि आफूले पिउने पानी सुरक्षित हुनुपर्छ । पानी सुरक्षित बनाउन पानी प्रशोधनको कुनै न कुनै विधि अपनाउनु पर्छ ।
पियूष प्लस खानेपानीलाई जीवाणु रहित बनाउने झोल हो । खानेपानी सुरक्षित बनाउन सजिलो र भरपर्दो झोलको रुपमा परिचित एक बोतल पियूष प्लसले १२०० लिटर पानी शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ ।
पियूष प्लसको प्रयोगले झाडापखाला, टाईफाईट जस्ता पानीजन्य रोगका जीवाणु नष्ट पार्छ । १० लिटर पानीमा दुई मिलिलिटर पियूष प्लस हालेको आधा घण्टा पछि पानी पिउन तयार हुन्छ । यसको प्रयोगबाट पानी उमालिरहनुपर्ने झन्झट बाट मुक्ति मिल्छ ।
पियूष प्लस वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोको प्राविधिक सहयोगमा इको कन्सर्न प्रा. लि. ले उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको छ ।
वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्थाले सन् १९९० देखि आफ्नै प्रयोगशालामा पानीको गुणस्तर जाँच्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो प्रयोगशाला नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हो । एन्फोको ल्याबमा पानीको गुणस्तर परीक्षण गराई पानीजन्य रोगबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ ।